Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Jolay 2019 à 09:54
80 octets ajoutés , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Jolay 2019 à 09:43 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Jolay 2019 à 09:54 (hanova) (esory)
Ny '''konsily ekiomenika''' dia [[konsily]] na fivorin'ny eveka sy ny manampahefana ara-pivavahana rehetra ao amin'ny [[Kristianisma|Fiangonana kristiana]]. Rehefa nisaratsaraka anefa ny Fiangonana kristiana nandritra ny tantaran'ny kristianisma dia nanohy nampiasa ny teny hoe ''konsily'' ny Fiangonana katolika na dia tsy nahafaoka ny Fiangonana kristiana manontolo izany fivoriana izany. Ny Ortodoksa, ohatra, dia tsy manaiky ny fahefan'ny konsily ankoatr'ireo enina voalohany, nefa ny Katolika dia manaiky ny konsily ekiomenika efatra ambin'ny folo tamin'ny taonarivo faharoa, izany hoe konsily ekiomenika miisa 21. Ny farany amin'ireo konsily ireo dia ny Konsily Vatikàna II izay novorina tamin'ny taona 1962 tatramin'ny taona 1965. Matetika ny mpitondra fanjakana tamin'ireo taonjato nifandimby no nampanao konsily fa ankehitriny kosa dia tsy miditra amin'izany ny fanjakana fa raharaha manokan'ny fivavahana izany.
Nanamafisana ny zavatra tapaka tao amin'ny Kosilin'i Nikea ny [[Konsily voalohany tao KonstatinopolyKonstantinopoly]] (na Konstantinopla) izay nanalavana ny Fanekem-pinoana nikenana ka lasa [[Fanekem-pinoana nikeana|Fanekem-pinoan'i Nikea sy Konstantinopoly]]. Io no konsily faharoa. Ny emperora Teodosio I no mampamory tamin'izany. Tapaka fa Andriamanitra koa ny [[Fanahy Masina]]. Tsy nandray anjara tamin'io ny [[Fiangonana Latina|Fiangonana latina]].
=== Ny Konsily tao Efeso (taona 431) ===
Ny [[Konsily tao Efeso]] (na Efesosy na Efezy) dia nanapahana ny maha [[Renin'Andriamanitra]] (gr.: ''Theotokos'') an'i [[Maria (renin'i Jesoa)|Maria]]. Iono konsily fahatelo. Nivoaka noho izany ny Fanekem-pinoan'i Efezy. Tsy eken'ny Protestanta ny fiantsoana an'i Maria ho Renin'Andriamanitra. Nitsipahana ny [[nestorianisma]] koa izany.
Ny [[Konsily tao Kalkedona]] (na Kalsedoana) no nanambaràna ny fananan'i Jesosy fomba (na natiotra) roa, dia natioran'Andriamanitra sy natioran'olombelona. Io no konsily fahefatra. Izany konsily izany no nanoherana an'i Eotikesy, izay nampianatra fa nifangaro ka tsy azo avahana ao amin'ny natioran'Andriamanitra ny natioran'olombelona ao amin'i Kristy. Heverin'ny tao amin'ny konsily ho fampianaran-diso izany fampianarana izany izay nataony hoe ''[[monofizisma]]''. Ny emperora Teodosio II no nampanao io konsily io. Nivoaka tamin'izany ny [[Fiekem-pinoan'i Kalkedona|Fanekem-pinoanan'i Kalkedona]].
Nitsipaka izany ireo izay nihevitra fa izany fisianana natiora roa miavaka izany dia fanoherana ny maha iray ny personan'i izay nambaran'i Kirilosy avy any Aleksandria sy nambaran'ny konsily tao Efeso. Nandray anjara betsaka tamin'izany konsily izany i Flaviano avy any Konstantinopoly sy i Leo I avy any Roma. Manda ny fanapahan-kevitr'io konsily io koa ireo Fiangonana atao hoe "monofizita" izay tsy manaiky ny fananan'i Kristy natioran'olombelona.
Nanamafisana ny fananan'i Kristy natiora roa ny [[Konsily faharoa tao Konstantinopoly]] ka nambara fa sady olona no Andriamanitra i Kristy. Io no konsily fahatelo. Nohelohina ny asa soratra manohana ny [[nestorianisma]]. Ny emperora Jostiniano no nampanao azy ary ny patriarka Eotikiiosy avy any Kostantinopoly no nitarika azy. Ny mba hanamafisan'ny Fiangonana ny fanamelohany ny soratry ny teolojiana telolahy, dia i Teodora avy any Mopsoesto sy i Teodoreto avy any Kira ary i Ibasy avy any Edesa, tamin'ny taona 553. Tsy tratra ny tanjon'ny emperora Jostiniano izay nikendry ny hampîhavana ny Kristiana kalkedoniana sy ny Kristiana monofizita ao amin'ny tapany atsinanan'ny empira.
Nambara tamin'ny [[Konsily fahatelo tao Konstantinopoly]] fa manana sitrapo roa i Kristy amin'ny maha olombelona sy Andriamanitra azy, dia sitrapon'olombelona sy sitrapon'Andriamanitra. Io no konsily fahenina. Ny emperora Kostantino IV no nampanao io konsily io mba handaminana ny tsy fifanarahan-kevitry ny Fiangonan'i Kostantinopoly sy ny Fiangonan'i Roma nateraky ny atao hoe [[Mônôtelisma|monotelisma]]. Nohelohina noho izany ilay atao hoe monotelisma izay milaza fa i Kristy dia tsy manana afa-tsy hery iray sy sitrapo iray, dia ny sitrapon'Andriaanitra, na dia manana natiora roa aza.
Ny [[Konsily faharoa tao Nikea]] dia natao mba hanamelohana ny fanimbana sary masina izay nomena ny anarana hoe ''ikonoklasma''. Io no konsily fahafito. Ny mpomba ny fanimbana ny sary masina dia nilaza fa mifanohitra amin'ny fivavahana kristiana marina ny fampiasana sary hanehoana an'i Kristy sy i [[Maria (renin'i Jesoa)|Maria]] sy ireo olomasina hafa. Nandresy tamin'izany konsily izany ny mpomba ny fampiasana ny sary masina (atao hoe ''ikonodola''). Nekena ny fanajana ny sary masina.
I Irena Ateniana (grika: Ειρήνη η Αθηναία / ''Eirênê ê Athênaia'') no nampanao io konsily io. Izany konsily izany dia nanapaka fa ny voninahitra omena ny sary masina dia tsy ho an'ilay sary fa ho an'ny zavatra asehon'ilay sary. Navahana ny atao hoe adorasiona, izay tsy tokony hatao afa-tsy amin'Andriamanitra, sy ny venerasiona, izay atao amin'ny sary masina na amin'ny sisan-javatra avy amin'ny olo-masina efa maty na amin'ny olo-masina mba hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Nohelohina ho toy ny mpanda ny fahatongavan'Andriamanitra ho nofo ny mpanimba sary masina (''ikonoklasta'').
Ny [[Konsily fahefatra tao KonstantipopolyKonstantinopoly]] no nampisaraka ny Fiangonan'i Roma sy ny [[Fiangonana ortodoksa tandrefana|Fiangonan'i Konstantinopoly]]. Io no konsily fahavalo. Notapahana fa ny Lovantsofina na Lovampinoana dia isan'ny fitsipiky ny finoana koa manampy ny [[Soratra Masina|Soratra masina]]. Nohelohina ny fiheverana ny olona ho fitambaran-javatra telo, dia ny vatana sy ny fanahy-aina ary ny fanahy; ary nohamafisina ny fiheverana ny olombelona ho fitambaran-javatra roa, dia ny vatana sy ny fanahy-aina.
Nataon'ny Fiangonana tandrefana hoe mivoaka amin'ny Ray sy ny Zanaka ny [[Fanahy Masina|Fanahy masina]]: izany no atao amin'ny teny latina hoe ''Filioque''("sy ny Zanaka"). Tsy neken'ny Fiangonana ortodoksa izany konsily izany. Nitsipaka ny fanovanana ny hoe ''Filioque'' amin'ny [[Fanekem-pinoana nikeana]] izany konsily izany. Ny Fiangonan'i Roma dia nino fa mivoaka amin'ny Ray sy ny Zanaka ny [[Fanahy Masina]] fa ny Fiangonan'i Konstantinopoly kosa tsy nanaiky an'izany fa nanamafy ny fivoahan'ny Fanahy Masina amin'ny Ray irery ihany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/971883"